Zụta igwe eletriki ikuku carbon kacha mma | ebike Shuangye
Mbido ngwaahịa igwe eletrik eletrik igwe eletrik Egwuregwu eletriki carbon na-acha igwe eletriki 26 nke anụ ọhịa nwere A6CB26M
Batrị: 36V 10Ah batrị wepụ batrị
Kwadobe: 7/21/27 Gears
Brek: 160 n'ibu diski breeki
Max Ibu Ibu: 120kg-150kg
Egwuregwu eletriki carbon eriri 26-anụ ọhịa ejiri arụ ọrụ
Carbon fiber nwekwara nnukwu okpokoro okpokoro n'ihi ike ya, ike ya na enweghị ọrụ ya. Dabere na feactor nke osisi ihe, carbon eriri igwe kwụ otu ebe ibu karịa aluminum alloy etiti. isi uru nke nkịtị ridrs bụ ịnya comfot nke electric carbon eriri igwe kwụ otu ebe. Na igwe eletriki carbon a na-ejikwa igwe eletriki igwe nke nwere 26-inch. Ọ bụrụ na ịchọghị igwe eletriki igwe dị arọ na nke dị ukwuu, igwe eletriki carbon fiber na-adabara gị, nke dị mfe, na-efe efe, ma na-adịgide adịgide.
Igwe eletriki a na-acha ọkụ eletrik na-eji 250w ma ọ bụ 350w moto na-enweghị ụkwụ na ụkwụ azụ iji mee ka igwe kwụ otu ebe iji chekwaa ndị na-agba ịnyịnya ike. Igwe eletrik na-eme igwe eletriki carbon carbon dị mfe iru ọsọ ọsọ 25-30km / h. Ọbụna ma ọ bụrụ na ị na-agba ọsọ ọsọ ọsọ ma ọ bụ na-agbago ugwu, moto ahụ na-enye ike zuru oke maka ndị na-agba ịnyịnya iji nweta mkpa ha.
36v karama lithium batrị na-eme nke a carbon fiber igwe kwụ otu ebe nwere ike ịnya ruo 40-60km na otu ụgwọ. Ikwu okwu na odori, Ọ dịkwa otú ahụ adaba-ana batrị n'ihi nke mbughari imewe. Naanị wepụ batrị na igodo wee chọta oghere iji kwụnye chaja 42V 2A na-eweta, oge nkwụ ụgwọ bụ ihe dịka awa 5-7.
Ngosipụta na Handlebar
Iji mee ka ndị na-agba ịnyịnya mara ezigbo oge na-agba ịnyịnya ígwè, igwe eletriki carbon a na-arụ ọrụ nke nwere ngosi LCD na-enweghị mmiri nke arụnyere na etiti aka, ị nwere ike ịma ike batrị, okpomọkụ, ọsọ ọsọ, moto oge. ike, ngụkọta njem, na ndị ọzọ. Dabere na ihe ọmụma ahụ, ị ​​nwere ike ịgbanwe atụmatụ ịnya ịnyịnya gị. E nwere a 21 ọsọ conjointed shifter na breeki levers ka ridre ịgbanwe Kwadobe mfe na breeki igwe kwụ otu ebe. Isi mkpịsị aka mkpịsị aka jikọtara ọnọdụ Pedal-Assist na-ewetara ndị na-agba ịnyịnya nhọrọ abụọ ịnya ịnya.
Iji hụ na onye ọ bụla na-agba ịnyịnya na-agba ịnyịnya, jiri ihe igwe 160 mechie breeki n'ihu na azụ azụ. Ọbụna ma ọ bụrụ na mmiri ma ọ bụ oyi ihu igwe ma ọ bụ ọnọdụ mberede. ọ nwere ike ozugbo inye ike braking ike iji igwe kwụ otu ebe. Enwekwara ntọhapụ ọsọ ọsọ na wiilị ụkwụ ihu, ọ dị mfe iwepu wiil dị n'ihu mgbe ịchọrọ. Ewezuga breeki diski igwe, enwere ike ịhọrọ breeki.
Magnesium alloy integrated wheel ọzọ isiike, ijikwa elu gbapụrụ ọsọ na elu ichekwa nke horsepower na torque na ikwu ala. Ọdịdị siri ike, nke na-adịghị agbanwe agbanwe na-emekwa ka magnesium alloy agwakọta wiil ndị ọzọ a pụrụ ịkọwapụta na ịnya ịnyịnya, ọkachasị n'ọsọ ọsọ dị elu karịa ebe nkwụsi ike na nhazi dị oke mkpa.
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na igwe eletriki eletriki carbon, kpọtụrụ anyị biko.
More anyịnya igwe: 29-anụ ọhịa ejiri ike eletriki mtb, ugwu ugwu ebike, 26 ″ abụba taya eletriki igwe eletrik, 26/28 nke anụ ọhịa ahụ obodo eletrik eletrik
Tags:carbon eriri igwe eletrik igwe eletriki carbon fiber
Mbụ: 29 * 2.35 anụ ọhịa eletriki nyere aka igwe kwụ otu ebe maka ndị okenye A6AH26